Vazhinji vedu footfall counterzviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedu footfall counter.
Isu tinoshandisa izvi footfall countersensor kupa inokurumidza-kuendeswa, yakapusa uye inoshanda tsoka yekuverenga mhinduro kumaraibhurari mazhinji, mamuseum, nzvimbo dzinoyevedza, zvitoro zvemaketani, supamaketi, uye dzimwe nzvimbo kumba nekune dzimwe nyika. Izvifootfall counter inogona zvakare kushandiswa kwe otomatiki kutora nzvimbo.
HPC015S footfall counter ndeye Ultra-diki, bhatiri-inofambiswa, WIFI-inopfuudzwa mutakurwi kuyerera kaunda. Imwe chete seti yemidziyo ndiyo inogona kusangana nezvinodiwa nevatengi. Icho skrini yakajeka uye yakagadziridzwa munguva chaiyo. Hapana imwe mari inodiwa. Unogona kusarudza iyo network network kana Stand-yega maitiro.
Kana iyo tsoka yekuverenga muchina inoshandisa iyo network network, iyo footfall counterinopa WIFI-AP network hotspot uye yakavakirwa-muWEB sevhisi. Mushure mekubatanidza nekupinda mukati nemvumo kuburikidza nechero runhare runhare (Android, IOS), shandisa iyo WEB peji kumisikidza parameter yeiyo mutyairi kuyerera kuverenga chiteshi kana kutarisa data, sevha inopfupisa uye inopa dzakasiyana siyana ongororo mishumo, kumisikidza neyechitatu-bato masisitimu kana kuwedzera mabasa.
Iyo tsoka yekudonha inokwanisa kuchengetedza mufambi kuyerera rekodhi zvinoenderana nenguva yakatarwa, uye kurodha mutakurwi kuyerera rekodhi kune yakasarudzika server nguva nenguva maererano nenguva yakatarwa.
Footfall counter inopawo yakazara rutsigiro rwehunyanzvi kubatsira mukuvandudza kwechipiri, API interface kufona uye kusimudzira kwechipiri, ichipa yakakwana tsoka yekuverenga muchinayekutaurirana protocol uye nehunyanzvi hweruzivo rutsigiro, uye dzakasiyana nzira docking nzira. Ipuratifomu inoshandisa mahunyanzvi ehunyanzvi kuti ape ruzivo rwakanaka uye rwakagadzikana Chiitiko, yakazvimiririra dhata yekuchengetedza data kuti ive nechokwadi chekuvimbika kwedata
Ruvara Dema kana chena
Kubatana Wireless, Wifi module rutsigiro
Kuonekwa upamhi 1-20 metres
Bhatiri anosvika pamakore 1.5 (epasi rese bhatiri)
Dhata Kuongorora nzira Nhare kana PC
Nei uchisarudza MRB tsoka yekumisidzana?
1. Zvinoenderana neshanduko mu data rekufamba kwevafambi rakaverengerwa ne footfall counter, nzvimbo dzakasarudzika uye nguva dzakasarudzika dzinogona kutongwa, uye manejimendi manejimendi, chengetedzo uye chengetedzo zvinogona kurongwa nemazvo kudzivirira kusafanira kwepfuma.
2. Kufamba kwemupfuuri munzvimbo huru yakaverengerwa ne fsensor ootfall inopa hwaro hwesainzi hwesanganisirwo marongero enharaunda yese.
3. Kuburikidza nenhamba uye kuenzanisa kwekuyerera kwevanofamba munguva dzakasiyana, nesainzi ongorora rationality yeiyo yekusimudzira yekushambadzira nzira.
4. Nekuongorora iyo data iri mu footfall counter, tarisa zvine hungwaru huwandu hwemutengo weyekare shopu yekuhaya.
5. Maererano nehuwandu hwevatakuri vakadzikira munzvimbo iyi, masimba emunhu anogona kugadziriswa zvine mutsindo kudzora mutengo.
6. Ipa hwaro hwesaenzi hwekugadzirisa kushambadzira uye kusimudzira bhajeti kuburikidza neyevatakuri kuyerera manhamba.
7. Kuburikidza ne tsoka tsoka, avhareji simba rekushandisa remufambi wekuyerera rinogona kuverengerwa kupa chirevo chekumira kwechigadzirwa.
8. Kuburikidza ne tsoka yekuverenga muchina, maawa ebhizinesi anogona kuiswa zvine musoro uye kurasikirwa kwemutengo kunogona kuderedzwa.
How footfall counter inoshanda?
Kuverenga musimboti: kupatsanura tekinoroji, infrared radiation.
Dhata yekuisa nzira: dhata yekuisa kune gore server kuburikidza neasina waya WIFI.
Dhata rekuratidzira: OLED hombe skrini inoratidza chaiyo-nguva kuratidzwa kweinopinda zuva uye yekubuda data.
Kuonekwa kwehupamhi: indoor 1-20 metres, yekunze 1-16 metres.
Kuverenga nzira: iyo nhamba yekunze nekubuda kwevafambi kuyerera kunogona kuverengerwa zvakasiyana.
Nzira yekutarisa yedata
Kuisa nzira: gadzirisa infrared transmitter uye infrared inogamuchira pakureba kwakaenzana kumativi ese echaini, kudzivirira kudzivirira mukati, uye kukwirira kwekumisikidza kuri pakati pe1-2-1.4 metres.
Power supply mode: USD magetsi, rechargeable lithium battery power supply (inogona kushandiswa kwemwedzi mitatu mushure mekubhadhara).
Iyo dhata yedhata yezvitoro zvakasiyana inogona kutaridzwa muakaundi imwechete, inotarisirwa panguva imwe chete, uye kuenzanisa kwedata kunogona kuitwa.
Kudzora kwekugara kunogona kuiswa ne footfall counter software.
HPC015S Yekuwira tsoka vhidhiyo
Tine mhando dzakawanda dze IR footfall counter, 2D, 3D, AI footfall counter, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo footfall counter zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB USB yekuverenga kwevanhu muchina wekutengesa HPC015U
Zvadaro: MRB isina waya yedhijitari vanhu vanopokana HPC005U